Ngokuvamile ezindlini zethu namahhovisi ungathola isitshalo esihle samafutha. Ibuye ibizwa ngokuthi i-redsula, i-cotidelon tree, futhi ibizwa ngokuthi i-monkey tree, umuthi wenjabulo noma umuthi wemali. Igama lokugcina lathola ngenxa yokuma kwamaqabunga ayo, kanye nokubonga emfundisweni yaseChina, ngokusho ukuthi i-dowry idonsela kanjani imali nokuzinza kwezimali endlini. Kodwa lokhu kunikezwa ukuthi umuthi ubeka kwi-feng shui.
Owesifazane onamafutha uvela eNingizimu Afrika futhi ungumuthi onamaqabunga amabili ngezibili, amaqabunga amabili alandelanayo ajikeleza angu 90 ° ahlobene naleso sangaphambilini. Amaqabunga ayenamafutha, ayenamathele, ajikeleze, ngezinye izikhathi aphihliwe, aphuphuke kusukela ngaphansi nangaphansi kwemiphetho. Ngokwemvelo, amanoni afika ku-1.5 m, nakuba emvelo kufinyelela ku-3 m. Okumangalisayo, i-blooms yomuthi. Izimbali ezincane noma ezimhlophe zimboza yonke isitshalo ngenqobe. Ekhaya, izimbali zivame kakhulu. Ngokweminye imibiko, intombazane enamafutha iyaluhlaza ngemva kweminyaka engu-15 kuphela.
Izinto eziphilayo ezisebenzayo, ezinikezwe umuthi wezimali, zithonya umoya emoyeni, futhi ziwusizo kakhulu emzimbeni womuntu. Egcwele izinto eziwusizo, umoya ukhulula ukukhathazeka kwemizwa nengqondo, ukukhathala, ukucindezeleka. Babuye babulale microflora eziyingozi namagciwane, ukuze umuntu fat in ekamelweni kuyisimo sokuvimbela kakhulu emakhazeni.
Kukholelwa ukuthi ama-succulents azosinda konke futhi akhuthazele, kodwa empeleni akunjalo. Kufanele uqaphele umuthi wenjabulo ngokucophelela.
I-Crassula iyisitshalo esinama-photophilous futhi ngisho nobusika sidinga ukukhanya okuningi. Indawo ekahle yokuhlala kuyo yiwindi eleningizimu-mpumalanga noma eliseningizimu. Ehlobo kuyadingeka ukuveza lesi sitshalo emgodini kube umoya omusha. Ngaphezu kwalokho, akudingi ukukhishwa kwelanga. Mayelana nokuntuleka kokukhanya, lesi sitshalo sibonisa ukubukeka kwayo: izilinganiso zelula, ziba mncane futhi amaqabunga abe amancane kunejwayelekile.
Ukushisa okungcono kunawo wonke kungu-22-25 ° C esikhathini esifudumele. Ebusika, izinga lokushisa lingadonsa ku-12-15 ° C, kodwa hhayi ngaphansi kuka-5-7 ° C. Kudingekile ukuba uqaphele izinga lokushisa elibusika kakhulu, kungenjalo amafutha azoba yi-lanky, futhi amaqabunga azowa.
Esikhathini esifudumele, obomvu kufanele baphuze izikhathi ezingu-1-2 ngesonto, kodwa emva kokumisa ungqimba ongaphezulu we-substrate. Uma izinga lokushisa lamakamelo lingaphansi kuka-12 ° C, ungabi namanzi nhlobo. Ukunakekela kahle umuthi wemali ukugcina umthetho owodwa oyinhloko: ibhodlela akufanele libe namanzi, ngaphandle kwalokho uhlelo lwempande luzobola.
Owesifazane onamafutha, akunandaba ukuthi umswakama oyisebenzisayo. Kodwa ukuvuselela igumbi kuyadingeka, ikakhulukazi ehlobo. Futhi kubalulekile ukugeza i-rosula ngaphansi kwephunga ukugeza uthuli.
Ebusika, abafaki i-rosula nhlobo. Kodwa ngenkathi efudumele, ngesikhathi sokukhula, umuthi kufanele uhlolwe kanye ngenyanga, usebenzisa umanyolo noma umanyolo we-cacti.
Izihlahla ezincane zeluleka ukuba zihlwanyele njalo ngonyaka, kanti isitshalo esidala - endaweni ethile eminyakeni engama-2-3. I-substrate kumele iqukathe umhlaba weqabunga kanye ne-sod, isanti, i-humus ne-peat ngobuningi obulinganayo.
Umuthi wemali uyancipha ngama-cuttings, amaqabunga, okumele aqedwe ngokucophelela nge-blade. Izinhlamvu ezifafazwe nge-carbon esebenzayo. Ukunquma amahlumela kufanele kushiywe izinsuku ezimbalwa ukuze ukomiswe bese usatshala endaweni engaphansi kweshlabathi nomhlaba ngo-1: 2 isilinganiso. Kodwa njengoba umkhuba ubonisa, amaqabunga nokusika ngokuvamile bawa phansi lapho bengabathinti ngokungathandeki, ngakho-ke akusadingeki ukulimaza umuthi. Ungase futhi usakaze isihlahla ngembewu, kodwa lokhu kuyinto engavamile kakhulu.
Imithi ye-Monkey ijwayele ukuhlaselwa yizinambuzane. Kodwa kaningi ungabona ucezu lwephepha ephepheni, elikhishwa kahle nge-swab yekotini efakwe ebhiya noma ngosizo lwezokwelapha zezitshalo ku "Aktellik."
Khulisa umuthi wakho wemali. Qaphela futhi uyayihlonipha futhi mhlawumbe kuyokunika ukuzinza kwezezimali.
Igumbi le-Palma liyahamba
I-tulip distillation ekhaya
Kuphi ukuthenga imbewu yamatabernontanang sanango?
Izitshalo zangaphandle: i-bryllia
Izakhiwo eziwusizo zamakhiwane kanye nokusetshenziswa kwawo emithini yomuthi
Abadlali be-cinema, u-Yuri Stepanov
Ukuphamba, ukuhlaselwa kwe-diaper, izilonda zesikhumba se-pustular
Ungabalekela kanjani kumyeni womphakathi?
Sinusitis ngesikhathi sokukhulelwa
I-wardrobe esebenzayo engu-4 eyimfihlo: kanjani ukuchitha imali ngeze
I-Satin - yiluphi uhlobo lwendwangu: Ukubuyekezwa kwelineni lokulala kusuka ezinhlobonhlobo ze-satin
Indlela yokuba yindoda emehlweni omuntu
I-Furunculosis: ukwelashwa ngamakhambi abantu
Ukuxhumana nengane ngesikhathi sokukhulelwa
Ukwelashwa kwezifo zesibindi izikhambi zabantu